Mampiasa Meksikana Cupid Hihaona Matory amin'ny Ankizivavy maimaim-Poana ny Ankizivavy Lanitra
Mampiasa Meksikana Cupid Hihaona Matory amin’ny Ankizivavy maimaim-Poana ny Ankizivavy Lanitra
Nanoratra momba ny isan-karazany ny tanàna samihafa sy toerana mba hitsena ny tovovavy eo amin’ny nankany Meksika. Na izany aza, dia matetika rehetra manana zavatra iombonana: Dia mahakasika ny fandoavana izany. Na izany ny fanorana lady manome fanampiny»soso-kevitra»ho an’ny mahavoky tanana asa amin’ny faran’ny fivoriana, ny freelancer hihaona ao amin’ny fikambanana sy afaka hanohitra ny hoe tsia rehefa mandihy nampirisika miaraka, na ny rahalahy, ramatoa fotsiny ianao boky an-tserasera amin’ny ny sasany alina raha tsy mahatsapa toy ny mandeha mivoaka sy ny mavitrika mitady tovovavy — azoko ny ankamaroany dia manoratra momba ny samy hafa karazana hookers ao Meksika. Ary raha tsy misy na inona na inona ratsy momba availing ny asa ny vehivavy miasa eto ary avy eo dia eo ny diany — ianareo mazava ho azy fa tsy fa betsaka ny fotoana mba ho maro ny namana vaovao ao amin’ny»tena»ny fiainana, ka mety ho mora kokoa fotsiny handoavana ny firaisana ara-nofo — ireo fandaniana ihany koa ny manampy ny faingana, ka na ho ela na ho taty aoriana ianao dia manontania tena hoe: Meksikana Cupid. Izany dia ny hugely malaza mampiaraka toerana miaraka amin’izao fotoana izao mihoatra, ireo mpikambana, ary ny mora indrindra ny toerana mba hitsena ny tsara Meksikana zazavavy izay tsy liana amin’ny vola. Maro ny ankizivavy izay liana amin’ny mora adventures amin’ny gringos, toy izany koa ny be pitsiny vehivavy tamin’ny asa lehibe izay mitady ny lehibe fifandraisana amin’ny vahiny. Tena self-manazava, dia mandehana fotsiny ao amin’ny habaka, mameno ny anarana, maha-lahy sy vavy, ny taona, mailaka sy ny tenimiafina, sy tsindrio ny famantarana-up bokotra izany (maimaim-poana).
Mazava ho azy, fa manao izany anefa nataony tao amin’ny ezaka kely ho ny mombamomba azy, na dia izany fotsiny ity iray na roa mendrika sary ny tenanao sy manoratra — sazy fampidirana ny mombamomba azy. Ohatra, dia afaka milaza fa ianao no nitsidika an’i Mexico voalohany (ny tovovavy eto fitiavana hihaona voalohany timers, minoa ahy), ary ianao mitady olona iray izay mampiseho anao manodidina. Fotsiny amin’ny alalan’ny fampiakarana ny sary sy ny fanoratana momba ny tenanao, dia ho azo antoka fa hahazo roa hafatra avy ny vehivavy isan’andro, tsy misy na dia outreaching ho azy ireo. Noho izany, raha misy olona efa nifandray ianao, tandremo fotsiny ny baolina rolling, no misy resaka kely, manontany azy amin’ny zavatra ataony izy ireo, midera azy ireo momba ny mahafinaritra ny sary na ny toerana efa, na ny momba ny malagasy («oay, tsy miteny anglisy tsara, efa mandeha amin’ny hafa firenena.»). Saingy mazava ho azy, izany ihany koa ny mora ny contact ilay tovovavy ny tenanao voalohany, ka raha tianao ny mombamomba azy dia anontanio azy ireo ny fanontaniana manokana — ohatra, raha toa ianao mahita fa izy dia ny mpandroso sakafo ao aminà hotely iray, manontany azy izay ny anaran ny trano fisakafoanana, ary tsy manana toerana lehibe noho ny voalohany fihaonana. Na raha izy no mpampianatra, lazao aminy fa mahatahotra, ary raha afaka boky sasany tsy miankina espaniola kilasy aminy.
Na raha toa ka mpianatra, dia nanontany azy ny fianarana
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Meksikana Cupid dia ny hoe izany no tena mahomby. Ny zavatra tiako ho lazaina amin’izany dia tsy dia mila hivoaka ho any amin’ny trano fisotroana, na ny trano fisakafoanana na na aiza na aiza ary miezaka miresaka ny ankizivavy — dia mahazo nanolotra azy ireo tamin’izany toerana ny volafotsy takelaka. Ary ireo rehetra ireo dia misy noho ny antony iray ihany — ny hihaona amin’ny lehilahy.
Izany no mahatonga izany tena mora
Plus, dia afaka mandamina ny daty aloha ianao na dia nanomboka ny diany tao an-trano — milaza fotsiny izy ireo amin’izao fotoana izao mikasa ny diany, ary ianao tsy manana olana ny mahita olona iray izay am-pifaliana mampiseho anao ny manodidina raha vao tonga, iza no mahalala, angamba izy fa na dia hitondra anao hiakatra avy any amin’ny seranam-piaramanidina. Mino aho fa azonao ny hevitra ny antony bebe kokoa, ireo vahiny mampiasa izany toerana, mba hihaona ankizivavy any Meksika, indro ny rohy indray
← Izay afaka hihaona tsara ry zalahy, izay te-hihaona tsara ny ankizivavy ao OC. Newport Tora-Pasika - Yelp
Webcam: tafio ny fihetseham-po →